Inona no Voalohany Amin’​ny Didy Rehetra? | Manatòna An’​Andriamanitra
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Armenianina Armenianina (Andrefana) Aymara Boligara Catalan Cebuano Chichewa Chitonga Chitumbuka Cinghalais Danoà Efik Espaniola Estonianina Failandey Frantsay Ga Grika Groenlandey Guarani Géorgien Hebreo Hiligaynon Holandey Hongroà Ibo Iloko Indonezianina Iokrenianina Isoko Italianina Japoney Kambôdzianina Kantôney Nentim-paharazana Kikongo Kikuyu Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kongo Koreanina Kreôla any Haïti Kroaty Lingala Litoanianina Luo Malagasy Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Maya Myama Ngabere Norvezianina Nzema Ossète Papiamento (Curaçao) Persianina Poloney Portogey (Brezila) Quechua (Bolivia) Romanianina Rosianina Samoanina Sepedi Serba (Sirilika) Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Silozi Sinoa Kantôney Notsorina Slovaky Slovenianina Soedoà Sranan Tongo Swahili Tagalog Tailandey Tatar Tetun Dili Tigrigna Tiorka Tiv Totonac Tseky Tshiluba Tsonga Twi Vietnamianina Xhosa Yorobà Zoloa Éwé
Inona no zavatra takin’Andriamanitra amintsika? Manome lalàna be dia be tsy maintsy harahina ve izy? Soa ihany fa tsy manao an’izany izy. Nilaza i Jesosy Kristy, Zanak’Andriamanitra, fa teny iray monja dia efa mahalaza ny zavatra takin’Andriamanitra amintsika.—Vakio ny Marka 12:28-31.
Andeha isika handinika izay nitranga tamin’ny fotoana nilazan’i Jesosy an’izany. Nampianatra tao amin’ny tempoly izy tamin’ny andro faha-11 amin’ny volana Nisana, ary efa andro vitsivitsy sisa izy dia ho faty. Nitady hamandrika azy ny fahavalony ka nametraka fanontaniana be dia be nampiady hevitra. Isaky ny namaly anefa i Jesosy, dia gina tsy nahateny izy ireo. Avy eo i Jesosy nisy nanontany hoe: “Inona no voalohany amin’ny didy rehetra?”—Andininy 28.
Tena mamandrika izany fanontaniana izany! Nisy 600 mahery mantsy ny lalàna tao amin’ny Lalàn’i Mosesy. Ary nisy Jiosy niady hevitra hoe iza tamin’ireo lalàna ireo no ambony indrindra. Ny sasany indray mety ho nilaza fa nitovy daholo ny lalàna rehetra ka tsy mety ny mieritreritra hoe misy lalàna ambony kokoa noho ny sasany. Ahoana àry no namalian’i Jesosy an’ilay fanontaniana?
Didy anankiroa fa tsy iray no nolazain’i Jesosy. Izao, hoy izy, ny voalohany: “Tiavo i Jehovah Andriamanitrao amin’ny fonao manontolo sy ny tenanao manontolo sy ny sainao manontolo ary ny herinao manontolo.” (Andininy 30; Deoteronomia 6:5) Misy ifandraisany ny hoe ‘fo’, ‘tena’, ‘saina’, ary ‘hery’, satria samy manondro ny maha izy an’ilay olona manontolo. Te hanamafy àry i Jesosy fa raha tia an’i Jehovah isika, dia hampiasaintsika ho azy ny fahaizantsika sy izay ananantsika rehetra. Hoy ny boky iray momba izany: “Tokony ho tia tanteraka an’Andriamanitra isika.” Raha tia an’Andriamanitra àry ianao, dia hanao izay fara herinao isan’andro mba hampifaliana azy.—1 Jaona 5:3.
Izao indray ny didy faharoa nolazain’i Jesosy: “Tiavo ny namanao tahaka ny tenanao.” (Andininy 31; Levitikosy 19:18) Tsy afa-misaraka ny fitiavana an’Andriamanitra sy ny fitiava-namana. Rehefa tia an’Andriamanitra mantsy ny olona iray, dia lasa tia namana koa. (1 Jaona 4:20, 21) Raha tia namana isika, dia izay tiantsika hataony amintsika no ataontsika aminy. (Matio 7:12) Asehontsika amin’izany fa tiantsika Andriamanitra, izay namorona antsika sy ny namantsika tahaka ny endriny.—Genesisy 1:26.
Teny iray monja dia efa mahalaza ny zavatra takin’Andriamanitra amin’ny mpanompony, dia ny fitiavana
Tokony ho tia an’Andriamanitra sy ny namana tokoa ve isika? Hoy i Jesosy: “Tsy misy didy lehibe noho ireo.” (Andininy 31) Miankina amin’ireo didy roa ireo, hoy izy, ny didy hafa rehetra.—Matio 22:40.
Tsy sarotra ny mampifaly an’Andriamanitra. Teny iray monja dia efa mahalaza ny zavatra takiny, dia ny fitiavana. Izany foana hatramin’izay no notakiny tamin’ny mpanompony, ary mbola izany ihany no hotakiny. Tsy fihetseham-po fotsiny anefa ilay hoe tia. Tsy amin’ny teny fotsiny koa no ahitana izany, fa amin’ny atao koa. (1 Jaona 3:18) Fantaro àry hoe ahoana no azonao ampisehoana fa tianao i Jehovah, ilay Andriamanitra “fitiavana”!—1 Jaona 4:8.
Famakiana Baiboly amin’ny Martsa
Marka 9-16–Lioka 1-6
Hizara Hizara “Inona no Voalohany Amin’ny Didy Rehetra?”